မာန် (တောင်လုံးပြန်) ● ဆရာမင်းသစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၁၃) | MoeMaKa Burmese News & Media
သန်းဝင်းလှိုင် - ဦးသန်းရွှေ (သို့မဟုတ်) နေပြည်တော်မင်းသားကြီး - အပိုင်း (၆)
မောင်ရစ် - မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အမှတ်ရသမျှ
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆
မာန် ။ ။ ဆရာပြောတာတော်တော်ခံရတယ်ပေါ့။
မင်းသစ် ။ ။ ဒါပေါ့၊ ယောက်ျားတခြားလုပ်စရာအလုပ်တွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျာ၊ ကျောင်းဆရာထက် ဝင်ငွေကောင်းတယ် ဗျာ၊ အဲဒါမလုပ်ဘဲနဲ့ ကျောင်းဆရာဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီသင်ကြားရေးကို တော်တော်ချစ်မြတ်နိုးလို့၊ ပင်လည်းပင်ပမ်းသေး တယ်နော်၊ အဲဒီတော့ ဘယ်သူတွေကပိုပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွကြိုးစားသလဲဆိုတော့ ဆရာတွေကပိုပြီးတော့ တက် ကြွကြိုးစားတယ်၊ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုမာန်သတိထားမိလား၊ ကျောင်းဆရာမရှိတော့ဘူး။
မာန် ။ ။ အဲဒါပြောတာလေဆရာ၊ကျောင်းတကျောင်းမှာ ဆရာကောင်းမရှိရင် နာမည်မထွက်တော့ဘူး။
မင်းသစ် ။ ။ မဟုတ်ဘူး၊ ယောက်ျားဆရာကိုမရှိတော့တာ။
မာန် ။ ။ ပညာရေးလျော့ကျတာ အဲဒါတွေပါလားဆရာ။
မင်းသစ် ။ ။ ပါတာပေါ့။
မာန် ။ ။ ဆရာဆိုတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားကလည်းပို ပြီးတော့ အဟန့်ရှိတယ်၊ ဆရာကောင်းတယောက်ရှိနေရင်ပေါ့၊
မင်းသစ် ။ ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျောင်းဆရာမရှိတဲ့ကျောင်းဟာ အဖေမရှိတဲ့အိမ်လိုပဲ။
မာန် ။ ။ ကောင်းလှချည်လားဆရာ
မင်းသစ် ။ ။ အဖေရှိတဲ့အိမ်၊ အဖေ့ရဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အမေ့ရဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အဲဒီနှစ်ခုကြားမှာနေရတဲ့ကျောင်းသားက ပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့၊ အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေ၊ ကျောင်းမှာ ဆရာနဲ့ဆရာမ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ ကျနော်တို့ကိုပုဆိုးဝတ်နည်းက ဗိုက်ကြောဆွဲလိမ်ပြီး သင်ပေးတယ်၊ ဟုတ်လား၊ အင်္ကျီဝတ်တာအချိုးမကျရင် ခေါင်းခေါက် တာ၊ ဆရာမတွေက၊ အဲဒီလိုဗျာ။
မာန် ။ ။ ဆရာပြောချင်တာတွေဆက်ပါဦးဆရာ။
မာန် ။ ။ ပြောချင်တာပြောပါဦးဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ ၊ပညာရေးကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံ့ဖို့ပါ၊ ကျနော်ပြောပြမယ်၊ အခု ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပညာရေးအဆင့်အမြင့်ဆုံး ဘယ်နိုင်ငံတွေလည်းမေးရင် ဖြေကြတယ်၊ အမေရိကန်တို့ အင်္ဂလန်တို့၊ အဝေးကြီး၊ အဝေးကြီးကိုကျန်ခဲ့ပြီ၊ နောက်ကျခဲ့ပြီ၊ အမေရိကန်အစိုးရလည်း စိတ်တွေညစ်နေတယ်၊ သူတို့ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်တော့ဘူးနော်၊ အဲဒီတော့ ဘယ်သူတွေရှေ့တန်းရောက်နေသလဲဆိုတော့ စကန်ဒီနေဗီးယားနိုင်ငံတွေ ရှေ့တန်း ရောက်လာတယ်၊ ဘလ်ဂျီယံတို့ ဟော်လန်တို့၊ နောက်တခါ နော်ဒစ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ နော်ဝေတို့၊ ဆွီဒင်တို့၊ ဖင်လန်တို့ …အဲဒါတွေကနံပါတ်ဝမ်းတွေကောင်းပြီ၊ အဲဒီမှာဖြစ်နေတာတွေ ပညာရေးဌာနက ငနဲတကောင်ကိုပြောပြချင်တာ၊ သူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာနှစ်ချက်ရှိတယ်၊ နောက်မှပြောမယ်၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ မူလတန်းပြဆရာဆရာမတွေက လစာအများဆုံး
မာန် ။ ။ ဩော်၊ ဂျပန်မှာလည်း အဲဒီလိုကြားတယ်ဆရာ
မင်းသစ် ။ ။ လုပ်ခလစာတွေများတယ်၊ ဒီမှာသားကRIT ဝင်တယ်လေ၊ သမီးက MC လေဆိုပြီး ကြွားကြတယ်မို့လား၊ သူတို့ ဆီမှာ ဘယ်လိုကြွားသလဲသိလား၊ သမီးလေးကပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတာ၊ သားက ဆရာအတတ်သင် တက်ခွင့်ရ တာ၊ အဲဒါကို ဂုဏ်ယူတာ၊ အရေးကြီးတယ်၊ဟိုတနေ့ကပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆရာဆရာမတွေလစာ တိုးပေးရမယ် ဆိုတာ ပညာရေးဌာနကညွန်ကြားရေးမှူးဆိုတဲ့ငနဲက မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့၊ သူတို့ဌာနမှာ လူသိပ်များတယ်တဲ့၊ ဒီကောင်ဗျာ ဘာ ဘာနဲ့နိုင်းပြတုန်းသိလား၊ မူလတန်းပြဆရာဆရာမတွေကို အောက်တန်းစာရေးလစာနဲ့ဗျာ၊ မဆိုင်ဘူး၊ဟိုကအောက် တန်းစာရေး၊ ဒါကဆရာမ၊ ဒါက ဆရာမဟ၊ အဲဒီလို လစာစကေးချင်း သွားယှဉ်မနေနဲ့၊ ဒါက ထွေအုပ်ဌာနရဲ့မြို့ပိုင်ထက်အရေးကြီးတယ်၊ ဒါ မူလတန်းပြဆရာမ၊ သိပ်ကိုအရေးကြီးတယ်၊ အဲဒီလိုဗျာ၊ အဲဒီငနဲက အဲသလိုပြောတယ်။
နောက်တခုပြောသေးတယ်၊ ကျောင်းမှန်မှန်တက် စာမခက်ဘာညာ။ အဲဒါတွေလည်း ပြန်လုပ်မယ်တဲ့။ လူသားအရင်း အမြစ်တွေ ဆုံးရှုံးကုန်မယ်တဲ့။ နေပါဦး ကျုပ်တို့က လူသားအရင်းအမြစ်ကို ထူတောင်မှာလား၊ ပညာတတ်တွေ မွေးထုတ်မှာ လား။ ဖွတ်ကြားအရင်းအမြစ်ကို ကျုပ်တို့ ထူထောင်ကြမှာလား။
ဟုတ်လား၊ ကိုမာန်စဉ်းစားကြည့်။ ဦးနုပြောသလိုပေါ့၊ ဒီကောင့်ကို ၄၀ ရအောင် ဆက်ဖြေခိုင်းတဲ့။ အမှတ်တစ်ရာပေး တဲ့ဘာသာရပ်မှာ လေးဆယ်တောင်မရဘူးဆိုရင် အဲဒါ ဖွတ်ကြား။ ဒီကောင့်ကို အအောင်ပေးမပေးနဲ့ အတန်းတင်မပေး နဲ့၊ ဒီကောင်ဒုက္ခပေးတော့မှာ။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ physic ဆယ့်ငါးမှတ်နဲ့လည်း တက္ကသိုလ် တက်တာပဲ။ အမှန်တော့ ပညာရေး ရဲ့အန္တိမရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ။ အောင်ချက်မြင့်မားဖို့လား၊ တကယ့်ပညာ တတ်တွေ မွေးထုတ်ဖို့လား။
မာန် ။ ။ ဟုတ်ပေါ့ဆရာ။
မင်းသစ် ။ ။ နှစ်ချက်ထဲပဲ၊ ပညာတတ်တွေ မွေးထုတ်မှာလား၊ အောင်ချက်မြင့်မားရေးလုပ်မှာလား၊ ဒီနှစ်ချက်ကိုရွေး။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အောင်ချက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်းမရှိဘူး၊ ဘယ်နိုင်ငံမှကိုမရှိဘူး၊ ဒီငပေါ တိုင်းပြည်မှသာ အဲဒါကြီးရှိနေတာ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဝန်ကြီးဌာနတွေထဲမှာအမှတ်သည်းခြေမရှိဆုံး၊ ပညာမရှိဆုံးပြောပါဆိုရင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနပဲ။
မာန် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ ဆရာ့ကိုကျနော်ပြောသလိုပေါ့။ နယ်ဘက်က၊ ချင်းပြည်နယ်ဘက်က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘွဲ့ရလာတဲ့ညီလေးတယောက်၊ ဟိုမှာလည်း ခင်လာတော့ ရန်ကုန်ရောက်တုန်းတွေ့ကြတယ်။ ဘာလာလုပ်တာတုန်းမေးကြည့်တော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး 4skill လာတက်တာတဲ့ နေပါဦး ဘာနဲ့ကျောင်းပြီးတာလဲမေးကြည့်တော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တဲ့၊ ဘယ်နှနှစ်တက်ရသလဲဆိုတော့ လေးနှစ်တက်ရတယ်။ လေးနှစ်တက်ရပြီး အခုဘာလို့လာထပ်တက်နေတာလဲမေးတော့၊ ကျနော်သိသလိုလိုနဲ့ ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဆရာ၊ လေးနှစ်ဆိုတာ နည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။
မင်းသစ် ။ ။ကျွတ်ကျွတ်၊ နှမျောစရာကြီးဗျာ၊ တကယ်တန်းသာ အင်္ဂလိပ်စာအေဘီစီဒီတတ်တဲ့ ကလေးတယောက်ကို တစ်နှစ်ခွဲသင်ရင် လုံးဝကိုအင်္ဂလိပ်စာတတ်စေရမယ်၊ 4skill တော့ မရဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ တတ်သင့်တာတတ်ရမယ်။
မာန် ။ ။ ဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေ၊ ခွန်အားတွေ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ ဦးနှောက် ခွန်အားတွေဆရာရယ်။
မင်းသစ် ။ ။ ဘယ်လောက်နှမျောဖို့ကောင်းသလဲဗျာ၊ အံ့ဩလို့ မဆုံးဘူး၊ အောင်ချက်မြင့်မားရေးတဲ့၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်၊ အောင်ချက်မြင့်မားရေးတဲ့၊ အမယ်လေးဗျာ၊ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ၊ အဲဒီတော့ ကုစားတို့ဆေးမြီးတိုတို့နဲ့ ပြန်တင်ပေးဦးမယ်။ အောင်ချက်မြင့်မားပါတယ်လုပ်ဦးမယ်။
မာန် ။ ။ သူတို့ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ ကလေးတွေဒီပညာနဲ့အတန်းတွေပြီးသွားတယ်၊ ရှစ်တန်းအောင်တယ်၊ ကိုးတန်း အောင်တယ်၊ ဆယ်တန်းအောင်တယ်၊ ဘွဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း အလုပ်အကိုင်အစိုးရက မဖန်တီးပေးနိုင်းဘူး၊ ဒီပညာနဲ့လည်း ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အတူတူ အတန်းလေးတွေများအောင်သွားရင် သူတို့ဘဝမှာ ဘယ်နှတန်းပြီး မြောက်ပြီပေါ့၊ သင်ယူ ပြီးပြီ၊ ဖြေပြီးပြီ၊ အောင်မြင်ပြီးကြောင်းပေါ့။ အဲဒီလက်မှတ်လေးတွေနဲ့ သူတို့ကိုစိတ်ကုစားချက်ပေးလိုက်တ သဘောပါပဲ။ ပညာအရည်အချင်းကြီးကြီးမားမားရသွားပြီဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာတွေသင်ပြီးတော့ အစိုးရကလည်း အလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ သင်တဲ့ပညာတွေကလည်း ကျောင်းပြီး သွားတာတောင် ဆက်လေ့လာရတုန်း။ ဆရာပြောတဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာတွေတောင်မှ ဆရာပြောသလို တကယ်တန်းဘာမှမတတ်ဘဲ ဘွဲ့တွေရနေတော့၊ ဒီလိုပဲသာမန်ဘွဲ့တွေကတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်ဖြစ် နေဦးမှာပါ။ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုပြီးတော့ အများကြီးရင်နှီးမြုပ်နှံမပေးဘူး။ ဘတ်ဂျက်တွေချမပေးနိုင်ဘူး၊ သင်ကြားရေးစနစ်တွေကိုမပြောင်းဘူးဆိုရင် ဒီအတိုင်း သွားနေဦးမှာပါဆရာ။
မင်းသစ် ။ ။ ဒီလိုပဲသွားမှာပါ၊ ဒီလိုပဲသွားမှာပါဆိုတာ၊ ဒီပုတ်သာပြောင်းသွားတယ်၊ ဒီပဲကဒီပဲပဲ၊ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ ခင်ဗျားဘယ်လောက်အသည်းနာဖို့ကောင်းတုန်းဆိုရင် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးတွေ၊ တကယ့်ဆရာဆရာမကြီးတွေ၊ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ၊ ရာထူးတိုးဖို့နေရာမရှိဘူး။ ဟိုကောင်တွေ(မိုးကျရွှေကိုယ်)နေရာယူထားလို့။ တကယ်ဆို ပညာရေးကိစ္စ ဒီဆရာဆရာမကြီးတွေနှောကျေအောင်သိတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဖူးလား။
မာန် (တောင်လုံးပြန်) ● ဆရာမင်းသစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၇) (1)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ, အင်တာဗျူး
One Response to မာန် (တောင်လုံးပြန်) ● ဆရာမင်းသစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၁၃)
Catwoman on November 21, 2016 at 8:27 am
I think you sound sexist. Women teachers are capable as well. Also there are summer schools etc for kids here in the US so they can try again and pass. Yes we also care for what s the percentage and how many students pass the test. The difference here is we don’t memorize.